Ciidamada dowlada somalia oo qabsaday degmada walanweyn | Mareergur.com	Friday, May 24th, 2013	Home
Ciidamada dowlada somalia oo qabsaday degmada walanweyn
Oct 7, 2012 - Comments off	Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa waxaa ay Si Buuxda uga fara maroojiyeen Al-Shabaab Taladii Magaaladda walan weyn ee Gobolka Shabeel;Adda hoose .
Ciidamadda Dowladda ayaa Galinkii Dambe ee shalay waxaa ay Gareen Meel Duleeka ka ah magaaladda iyadoo halkaana ay iskaga baxeen Ciidamadii iyo Maamulkii Al-Shabaab ee Ka ariminayay Magaaladda.
Amaan Duulaha Ciidanka XDS Gen-Cabdi Kariin Yuusuf Aadan Dhaga badan oo ka hadlayay Gaarista ay gaareen Walan weyn aya waxaa uu sheegay isagoo la hadlayay Raadiyaha Dowladda in Walan weyn ay Ciidamadu Xalay ku hoyden Duleedka Magaaladda Saakana ay Gudaha u galayaan isagoo in taa ku daray in isla Maantaba ay ka go,antahay in Ciidamadu ay Fariisin ka sameystaan Garoonka Bali doogle oo Duleedka ka ah degmadda Walan weyn ee G/Sh/hoose.
Ciidamadda ayaa Saaka lagu soo Waramayaa inlagu dhex arkayo Magaaladda iyagoo wata Dabaabaadka Dagaalka waxaan uu dhaga badan ugu Baaqay Dadka deegaanka in ay is dajiyaan oo aysan Dhibaato kala kulmi doonin Ciidamada is garab sanaya ,
Dhinaca kale Axmed Cumer Mudane Gudoomiye ku xigeenka Dhinaca amaanka ee Mamulka Gobolka Sh/hoose ayaa waxaa uu Xaqiijiyay In Ciidamada Dowladda ay si buuxda ula wareegeen Degmadaasi .
Qabsashada Degmadda walanweyn ee Gobolka Sh/hoose ayaa waxaa ay ka dhigeysaa in Gobolka sh/hoose inta badan ay Ciidamada Dowladda Gacanta ku dhigeen oo ay uga harsanyihiin Degmooyin kooban in Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay Fariisin ka dhigtaan Garoonka Bali dooglena waxaa ay Ciidamada ka saacideysaa in uu Fududaado isku xirka goboladda Bay iyo Sh/hoose.